ကိုရိုနာ – Shwe Likes
ပြည်တော်ပြန် သုံးဦးတွင် အတည်ပြု ထပ်မံတွေ့ရှိ
Shwe | June 21, 2020
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၂၁-၆-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ ၁။ (၂၁-၆-၂၀၂၀) ရက်နေ့အတွက် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာတွင် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ (ပထမအသုတ်) ဓာတ်ခွဲ နမူနာ (၅၆၄)ခုနှင့် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (DMR)မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၄၅) ခု၊
ပြည်တော်ပြန်များထဲမှ စံချိန်တင်ကူးစက်မှု ထပ်မံတွေ့ရှိ ( ဘားအံတစ်မြို့ထဲမှာတင် ၂၃ ယောက် တွေ့ရှိ )
Shwe | June 19, 2020
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၁၉-၆-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက်(၈:၀၀)နာရီ ၁။ (၁၈-၆-၂၀၂၀) ရက်နေ့အတွက် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာတွင် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၆၆၉) ခု နှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(မော်လမြိုင်) (PHL-MLM) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၉၄) ခု၊
ဘူးသီးတောင် မောင်တော မှ ခရီးသွားရာဇ၀င်မရှိသူ ကူးစက်လူနာသစ် တစ်ဦး ထပ်မံတွေ့ရှိ
Shwe | June 18, 2020
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း(၁၈-၆-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၈:၀၀)နာရီ ၁။ (၁၇-၆-၂၀၂၀)ရက်နေ့အတွက် COVID-19 ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာတွင် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(ရန်ကုန်) (NHL) မှ (ဒုတိယအသုတ်) ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၆၅၉)ခု နှင့် ရန်ကုန်မြို့၊ အမှတ် (၁) တပ်မတော်ဆေးရုံကြီး(ကုတင် – ၁၀၀၀)မှ (ဒုတိယအသုတ်) ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၃၅)ခု နှင့် စုစုပေါင်း
ပီကင်းမြို့ရဲ့ အကြီးဆုံး ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဈေးကြီးကနေ ပြန်လည် ကူးစက်လာ တဲ့ ကိုဗစ် နဲ့ သတိကြီးကြီးထားရတော့မယ့် မြန်မာ
Shwe | June 14, 2020
ပီကင်း မှာ_COVID_တွေ့တဲ့ ကိစ္စ ပီကင်း က အချို့နေရာေ တွ ကို စစ်ပွဲ ကာလ အတွင်းပုံစံ နဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှု (wartime management) လုပ်နေပါတယ်။ ပီကင်းက အကြီးဆုံးဟင်းသီးဟင်းရွက်ဈေး Xinfadi ကိုပိတ်ချလိုက် ပါတယ် ။ ပြီးတော့ အနားတဝိုက် က အိမ်ယာ ဝင်းတွေ ကိုပါ
Shwe | June 12, 2020
၁။ (၁၂-၆-၂၀၂၀) ရက်နေ့အတွက် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာတွင် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ (ပထမအသုတ်) ဓာတ်ခွဲ နမူနာ (၄၇၀) ခု၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (DMR)မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၄၅) ခု၊ ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေး ဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (မန္တလေး) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၉၈) ခုနှင့်
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး သည် ဝူဟန်သားငါးဈေး မှ စတင်ခဲ့ခြင်း မဟုတ်ကြောင်း တရုတ်ကြီးဝန်ခံ
Shwe | June 9, 2020
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ပိုး သည် ဝူဟန် သားငါး ဈေးတန်းမှ လာသည်ဟု ပထမ က ယူဆမိသော် လည်း ယခုမူ ဝူဟန်ဈေး သည် လည်း ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံလိုက်ရ သည့်နေရာ သာ ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည် ဟု တရုတ်နို င်ငံ တွင် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ရောဂါ ကာကွယ်
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း(၈-၆-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ
Shwe | June 8, 2020
၁။ (၈-၆-၂၀၂၀) ရက်နေ့အတွက် COVID-19 ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာတွင် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ (ပထမအသုတ်) ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၄၄၆)ခု၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (DMR)မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၀၁) ခု နှင့် ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေး ဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (မန္တလေး) (PHL – MDY) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၆၉)
ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ၉၉ % ထိရောက်မှု ရှိဟုဆိုလာတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ…. ကနဦးအဖြစ် လူ သန်း(၁၀၀) စာ အရင်ထုတ်မည်
တရုတ်နိုင်ငံ ဘေဂျင်းမြို့အခြေစိုက် ဇီဝနည်းပညာကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Sinovac ရဲ့ ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးက ၉၉ ရာခိုင် နှုန်း ထိရောက်မှုရှိပြီး စိတ်ချရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီဆေးကို လူပေါင်း သန်းရာနဲ့ချီအတွက် ပေးနိုင်တော့မယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ် ဆေးကို အဆင့်၂ စမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ် ထားခဲ့ပြီး လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုမှာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၁၀၀၀ ကျော်နဲ့ စမ်းသပ်ထား
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၇-၆-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ
Shwe | June 7, 2020
၁။ (၇-၆-၂၀၂၀) ရက်နေ့အတွက် COVID-19 ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာတွင် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ (ပထမအသုတ်) ဓာတ်ခွဲ နမူနာ (၅၆၀)ခု၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (DMR)မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၆၅) ခု၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (မန္တလေး) (PHL – Mdy) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၈၃) ခုနှင့် ရန်ကုန်မြို့၊
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၆-၆-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ
Shwe | June 6, 2020
၁။ (၆-၆-၂၀၂၀) ရက်နေ့အတွက် COVID-19 ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာတွင် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ (ပထမအသုတ်) ဓာတ်ခွဲ နမူနာ (၁,၁၃၈)ခု၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (DMR)မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၆၁) ခု၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (မန္တလေး) (PHL – Mdy) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၇၇) ခုနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန
ကြည့်မိသူ ဟာခနဲ ဟင်ခနဲ ဖြစ်သွားေ စမယ့် နန်းမွေ့စံ ရဲ့ အကြမ်းစား ဗီဒီယို
မအေးသောင်းနဲ့ ပတ်သတ် တဲ့ သတင်းတွေ ဖွင့်ချလိုက် တဲ့ ဟန်းငြိမ်းဦး
မွေးနေ့ဆုတောင်းထားတဲ့ couple ပုံလေးနဲ့ ချစ်သူကို အလင်းပြပီး အမျိုးသား ပရိတ်သတ်ကြီးကို အသည်းခွဲလိုက်တဲ့ မအေးသောင်း
မုဆိုးမမိခင် နှင့် မီးမရှိတဲ့ရွာလေးကနေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး ဝိဇ္ဇာဘာသာတွဲအမှတ်အများဆုံး၊ (၆)ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် မောင်ဝေယံလင်းကျော်
(၁၀) တန်း အမှတ်စာရင်း ထုတ်ပေးမယ့် ရက် နဲ့ ထုတ်ပေး မယ့် ပုံစံကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီ (ရှယ်ထားပေး ကြပါအုံးဗျို့….)
တိုင် ရွန် နဲ့ မအူပင်သား ရဲမင်းနောင် ONE BY ONE ကိစ္စ ဂျွန် လွင် ပြော ပြီ